क्लालिफोर्नियामा डढेलोबाट २७ जनाको मृत्यु, राष्ट्रपति ट्रम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने ! « MNTVONLINE.COM
क्लालिफोर्नियामा डढेलोबाट २७ जनाको मृत्यु, राष्ट्रपति ट्रम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने !
एजेन्सी । अमेरिकी पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा डढेलोका कारण आइतबारसम्म २७ व्यक्तिको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डढेलो प्रभावित क्यालिफोर्निको भ्रमण गरी आपतकालीन सेवा प्रदायक निकायका अधिकारीलाई भेटी डढेलोबाट भएको क्षतिबारे जानकारी लिनेछन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्ला केही हप्ता भएका चुनावी अभियानमा डढेलोबारे खासै चर्चा नगरेपनि शनिबार पश्चिमी राज्य नेभाडाको अभियानमा डढेलोको क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए । “उनीहरूसँग यस्तो कुनै कुरा थिएन,” ट्रम्पले शनिबार भने । “एकदम सरल कुरा जङ्गलको व्यवस्थापन हो । कृपया यस शब्दलाई याद गर्नुहोस् ।”
राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार जो वाइडेनले डढेलोलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर सरकारले जलवायुको मुद्दासँग जोडेका छन् । बाइडेनले डढेलो र विनासबारे भन्नुभयो, “विज्ञान स्पष्ट छ र यी जस्ता घातक सङ्केतहरूलाई भूलबस पनि व्यवस्थापनमा त्रुटी गर्नु हुन्न । जलवायु परिवर्तनले महत्वपूर्ण र अस्थित्वगत जीवनशैलीलाई खतरा सिर्जना गरेको छ ।”
वाइडेनले भने, “ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन चर्चा वेकारको अफवाह भन्दै आउनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले यस वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेको छ तर तथ्यहरूले जलवायु परिवर्तनको एनेन्डालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न अनिवार्य शर्त भएको देखाएका छन् ।” वायुको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको लेखाजोखा राख्ने स्वीडेनी एक प्रविधि कम्पनी, आइक्युएयरले शनिबार र अति वायु प्रदूषण भएका विश्वका पाँच शहरहरू पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी लस एन्जेल्सदेखि क्यानाडाको भ्यानकुवर क्षेत्रमा सिमित रहेको बताएको छ ।